Njani iReverse Logistics Solutions can Streamline Returns Returning Processing in the E-Commerce Marketplace | Martech Zone
Ubhubhani we-COVID-19 wabetha kwaye onke amava okuthenga atshintshe ngequbuliso nangokupheleleyo. Engaphezulu kwe 12,000 Iivenkile zezitena kunye nodaka zavalwa ngo-2020 njengoko abathengi babefudukela kwi-intanethi besuka kubutofotofo kunye nokhuseleko lwamakhaya abo. Ukuhambisana nokutshintsha kwemikhwa yabathengi, amashishini amaninzi andise ubukho bawo be-e-commerce okanye afudukela kwintengiso ye-Intanethi okokuqala. Njengoko iinkampani ziqhubeka nokwenza olu tshintsho lwedijithali kwindlela entsha yokuthenga, bachukunyiswa yinyani esisiseko yokuba njengoko intengiso ye-Intanethi isanda, ngokunjalo nembuyekezo.
Ukuhambisana nemfuno yokusetyenzwa kwembuyekezo yabathengi, abathengisi kufuneka basebenzise izixhobo eziqinileyo, ezivulwa ngetekhnoloji ukunceda ukuhlengahlengisa inkqubo yembuyekezo, ukuphelisa umsebenzi wokubuyiswa kobuqhophololo, kunye nokufezekisa imida yenzuzo ephezulu. Ukuzama ukunqumla emanzini amdaka okwenziwa kwembuyekezo inokuba yinkqubo ekhohlisayo efuna uncedo lweengcali kulungiselelo lolungiselelo lwangaphandle. Ngokusebenzisa amandla a Inkqubo yoLawulo lokuBuyisa (I-RMS) ngokubonakala okongeziweyo kunye nabathengisi bomkhondo abakwizinga eliphezulu banokulawula ngcono imbuyekezo, baphucule indlela yabo yengeniso, kwaye baphucule iireyithingi zabathengi.
Yintoni iNkqubo yoLawulo lokuBuyisa (RMS)?
Iqonga le-RMS lisebenzisa imbuyekezo eqwalaselweyo kakhulu yokusetyenzwa komsebenzi ukulawula nokulandelela yonke inkalo yohambo lwemveliso ebuyisiweyo, ukusukela oko isicelo singenisiwe ukuya kwixesha apho imveliso yoqobo ibuyiselwa kuluhlu lwenkampani ukuze luthengiswe kwakhona, kwaye ukubuya komthengi igqityiwe.
Inkqubo iqala ngokuqalisa imbuyekezo, ethi isebenze xa umthengi ecela imbuyekezo. Injongo yesisombululo se-RMS kukuqinisekisa ukuba amava okubuyisela umthengi amnandi njengoko inkqubo yokuthenga yayinjalo. Isisombululo se-RMS senzelwe ukunceda iinkampani ziphucule inkonzo yazo yabathengi ngokusebenzisa unxibelelwano oluzenzekelayo ukunika uhlaziyo lwabathengi ekubuyiseleni kwabo, okususa imfuno yokulandela iifowuni kunye nee-imeyile kumaqela enkonzo yabathengi.
Emva kokuba isicelo singenile, isisombululo siya kunika umthengisi ngokubonakala kunye nokuqonda kwedatha kwisizathu (s) sokubuyisela ukuqikelela iindleko kunye nexesha elihambelana nembuyekezo yexesha elizayo kunye nokubeka iliso nayiphi na into engaqhelekanga, enokuthi ibe nobuqhetseba ngumthengi. Zininzi iindlela umthengi anokwenza ngazo ubuqhophololo okanye abuyisele ukuxhatshazwa, kodwa zonke zikhokelela kwingxaki enye enkulu kubathengisi- indleko.
Ukusetyenziswa kakubi kwemigaqo-nkqubo yembuyekezo yabathengi kubiza amashishini ukuya kuthi ga $ 15.9 billion ngonyaka nganye.
Federation of National Retail
Ukubonakala okubonelelwa ngesisombululo esomeleleyo se-RMS ngexesha lamanyathelo okuqala okubuyisela kunokugcina abathengisi be-intanethi iindleko zeenkwenkwezi. Yakuba ingenisiwe imbuyekezo, inyathelo elilandelayo kukuqinisekisa ukuba ixabiso lemveliso ebuyisiweyo lixabisa kancinane na kunokuba ithunyelwe kwakhona kwindawo yokugcina impahla yenkampani. Oku kubaluleke kakhulu kumashishini e-e-commerce ehlabathi ajongene neendleko eziphezulu zokuthumela ngenqanawa. Kwezinye iimeko, ishishini linokuthumela umthengi imveliso entsha kwaye libaxelele ukuba bagcine endala. Iqonga le-RMS linikezela ngedatha efunekayo ukwenza ezi zigqibo.
Ezinye iindawo zokugcina iimpahla zizaliswe yimbuyekezo, ngoko ke isisombululo se-RMS sinokumisela ukuba yeyiphi indawo esebenza ngcono ngokusekwe kwiimfuno zabo zokuzalisekisa uluhlu kunye nokuba bakufutshane kangakanani kwindawo yomthengi. Nje ukuba isiza sikhethiwe, imveliso ingajongana naluphi na ukulungiswa kunye nokuhlolwa okubonwa kuyimfuneko ngaphambi kokuba ilungele ukubuyela kuluhlu lwempahla.
Inyathelo lokugqibela kwinkqubo yokubuyisela ukulandelwa kwepasile kunye nokubuyisela. Inkqubo yokuphelisa inkunkuma yembuyekezo yemveliso ilungelelanisiwe, nakuphi na ukulungiswa okuyimfuneko kunye nohlaziyo lwenziwa, kwaye imbuyekezo yabo bobabini umthengi kunye neshishini iyaqukunjelwa.
Ukudibanisa isisombululo se-RMS sokugqibela siya kuba nemiphumo ebonakalayo, ehlala ixesha elide kumashishini e-e-commerce ukusuka kwimbono yemali kunye nenkonzo yabathengi. Izixhobo ze-RMS kunye netekhnoloji zinokunceda iinkampani ukuba zifezekise iziphumo ezinqwenelekayo ngokunyusa imida yengeniso, ukunciphisa ilahleko yengeniso evela kwiimbuyekezo ezibizayo, kunye nokuphucula ukwaneliseka kwabathengi. Njengoko abathengi beqhubeka nokwamkela i-e-commerce, amandla e-RMS anika abathengisi uxolo lwengqondo olufunekayo ukubonelela ngenkonzo yomthengi esemgangathweni kunye nokusebenza ngokugxila kwiindleko zokusebenza.
I-ReverseLogix ukuphela kokuphela kokuphela, i-centralized, kunye nenkqubo yokulawula imbuyekezo edibeneyo eyakhelwe ngokukodwa ukuthengisa, i-ecommerce, imveliso, kunye nemibutho ye-3PL. Nokuba i-B2B, i-B2C okanye i-hybrid, iqonga le-ReverseLogix liququzelela, lilawula, kwaye linike ingxelo kuyo yonke imbuyekezo yobomi.
Imibutho ethembele kwi-ReverseLogix inikezela ngomgangatho ophezulu kakhulu umthengi ubuyisela amava, gcina ixesha labasebenzi ngokuhamba ngokukhawuleza komsebenzi, kwaye wandise inzuzo nge-360⁰ ingqiqo kwidatha yembuyekezo.
Funda ngakumbi ngeReverseLogix
tags: 3plb2b2cb2ceCommerceecommerce buyelayokuvelisaipasile recoveryukulandelela ipasileukulandelwa kwepasile kunye nokubuyiselaiimbuyekezo zokuthengisaimbuyekezoibuyisela amavaibuyisela izintoinkqubo yolawulo lwembuyekezoibuyisela inkquboUkuguqula izintoreverselogixrms